Misintona magazine maimaim-poana: ireo tranonkala 3 tsara indrindra amin'ny teny espaniola | Vaovao momba ny gadget
Sintomy maimaimpoana ireo magazine: ireo tranonkala 3 tsara indrindra amin'ny teny espaniola
Paco L Gutierrez | | eReaders, General
Ny vanim-potoana niomerika dia zava-misy, na amin'ny tsara na amin'ny ratsy. Zava-misy voaporofo fa tsy dia mihena ny mpanao gazety ampiasaina amin'ny endrika ara-batana, satria loharanom-baovao marobe ny internet ho takalon'ny tsindry iray na fikarohana iray. Mbola misy izany fahafinaretana mamaky gazety mangina eo amin'ny latabatra fisakafoanana izany raha mankafy ny kafe na ny sakafo maraina izahay. Nefa mazàna dia matetika no misy an'io seho io miaraka amin'ny finday avo lenta amin'ny tanana iray ary kafe etsy an-tànana.
Tsaroako tsara rehefa nandeha tany amin'ny kiosokiko natokisana tamim-paharisihana ireo magazine lalao video tiako indrindra aho satria ho fanampin'izay loharanom-baovao tokana dia nanome demo na afisy izay ahantonantsika ao amin'ny efitranonay avy eo. Saingy ankehitriny ny demo dia zaraina nomerika tsy andoavam-bola, miaraka amin'ny goavana tombony azo havaozina isa-minitra. Na izany aza, ny taratasy, raha misy vaovao tsy mety dia tazominay mandra-pahatongan'ny fizarana manaraka izany. Amin'ity lahatsoratra ity isika dia hahita ireo tranonkala tsara indrindra hampidina magazine maimaim-poana.
1 Tombony amin'ny famakiana nomerika
2 Ahoana ny fomba fampidinana maimaimpoana ireo magazine
6 Toerana tsara indrindra hampidinana magazina fanatanjahantena
7 Tranonkala tsara indrindra handefasana magazine amin'ny fo
Tombony amin'ny famakiana nomerika
Ny tombony lehibe an'ity endrika ity dia ny fahafaha-miaina tsy miankina amin'ny kiosk, ary koa ny habaka itehirizantsika ao anaty fitehirizana. Tsy afaka manadino koa isika ny fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ny fampihenana ny fampiasana taratasy ho an'io karazana endrika io, zavatra toa tsy maninona, fa manandanja be ihany satria ny taratasy dia ilaina tsara ary raha afaka mamonjy kely isika dia manao tsara ny planeta.
Tsy azontsika hadinoina ny fampiononana amin'ny fananantsika ireo gazetintsika amin'ny fitaovana rehetra, na aiza na aiza misy antsika, manomboka amin'ny finday avo lenta, mankany amin'ny iPad. Miaraka amin'ny katalaogala goavambe izay ahitantsika izay magazine mahaliana antsika. Saika ny fitaovana rehetra dia manana mpamaky PDF, izay endrika fampiasa indrindra amin'ity karazana atiny ity. Kely dia kely ny ilana azy ka tsy mila miahiahy momba ny fitehirizana ao amin'ny fitaovantsika isika. Azontsika atao aza ny mampakatra azy amin'ny rahona mba hidirantsika amin'ny magazine nefa tsy mila misintona azy ireo intsony.
Ahoana ny fomba fampidinana maimaimpoana ireo magazine
Ny fikarohana Google tsotra dia manome antsika fidirana amin'ny loharano an'arivony hisintona rakitra PDF avy amin'ny magazine. Saingy manana fisalasalana na tahotra foana izahay ny tsy hahafantatra izay tena ampidinintsika, na dia manana antivirus tsara aza isika dia hampitandrina antsika izany raha tsy misintona izay tena tiantsika halaina isika. Ny sasany amin'ireto vavahady ireto dia manararaotra misintona plugin na extension ho an'ny browser, koa tokony hitandrina isika raha tsy tiantsika hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny browser ny alàlan'ny fametrahana zavatra izay tsy tokony hataontsika.
Noho izany antony izany dia hanao tranokala mifantina izay ahafahantsika misintona ny gazetinay tsy misy risika. Izy rehetra dia samy manana katalaogy be hampidina magazine na boky. Raha hisintona azy ireo isika dia tsy hiditra amin'ny tranonkala fotsiny ary hisafidy ilay rakitra, na amin'ny alàlan'ny fampidinana mivantana na amin'ny alàlan'ny programa Torrent izay atolotry ny tranonkala mihitsy.
Ny tranonkala voalohany izay horesahantsika, Kiosko.net dia serivisy fanaovan-gazety tena izy sy tsotra. Serivisy fitobiana mivantana izy io izay ahafahana mijery ireo fonony lehibe indrindra amin'ny gazety sy gazety manandanja indrindra eto an-tany. Ny endrika dia hevitra tany am-boalohany an'ny developer Hector Marcos ary tena miasa io.
Ao amin'ny pejy lehibe no ahitantsika gazety 5 isaky ny kaontinanta, izy rehetra dia amin'ny endriny anglisy sy espaniôla. Afaka manitatra ny fonony amin'ny alàlan'ny fanetsehana ny kitondro totozy hanakaiky azy fotsiny. Ho fanampin'izay, afaka mihalehibe indray izy io raha tsindrio eo amin'ny fonony amin'ny tsindry lehibe. Raha tsindrio indray dia hitondra antsika rohy amin'ilay gazety resahina.
Manana safidy an-gazety an-tsoratra maro be any Espana izahay, izay ahitantsika karazana karazany azo isafidianana. Anisan-dry zareo "Gazety isan'andro", "Gazety", "Gazety informatika", "Gazety kolontsaina" sy ny maro hafa. Isan'ireo sehatra malaza indrindra dia ahitantsika ihany koa ny magazine fanaovana fanatanjahantena sy ny magazine mifosafosa izay tsy isalasalana fa ny be mpitaky indrindra.
Tokony holazaiko fa ity pejy ity dia toa ahy ho iray amin'ireo tsara indrindra hitantsika tamin'ny internet, satria tsy vitan'ny hoe mamela antsika hijery ny gazety miteny Espaniôla rehetra izy io, fa manome antsika fidirana amin'ny gazety vahiny rehetra koa, ka raha mahay fiteny isika dia ho fantatsika izay rehetra mitranga eto an-tany.
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo lehibe eto amin'ity sehatra ity amin'ny resaka famakiana gazety, fa amin'ity tranga ity dia amin'ny teny Anglisy manontolo ny atiny maro an'isa. Izy io dia manana katalaogy be dia be izay ahitantsika ny fanaovan-gazety saika ny lohahevitra rehetra. Noho ny motera fikarohana maheriny dia ho hitantsika izay tadiavintsika, na dia lazaiko aza, ny ankamaroan'ny valiny dia mety amin'ny teny anglisy.
Mazava ho azy, azontsika atao ny manampy sivana amin'ilay karoka voalaza, anisan'izany ny sivana fiteny, ka raha mitady fiteny manokana fotsiny isika dia ho hitantsika izany. Raha tsy misy isalasalana dia iray amin'ireo tranokala fanaovana gazety PDF feno indrindra amin'ny Internet izy io. Saingy tsy isalasalana Mety tsy hahomby izany raha tsy amin'ny magazine espaniola ihany no tadiavintsika.
Manana atiny be dia be avy amin'ny magazine fanatanjahantena na magazine fifosana izahay, na dia mety tsy maharaka mihitsy aza izy ireo, koa raha mitady hanana ny farany amin'ny Espaniôla ianao dia Kiosko.net dia azo antoka fa safidy tsara kokoa noho io.
Tonga amin'ny izay ho ahy ny tranonkala mivantana indrindra rehetra aho, raha vantany vao miditra izahay dia mahita ireo fanontana farany, izay misy mahita magazine ara-panatanjahantena, fo, motera, ankoatry ny hafa isika. Ny anaran'ny tranonkala dia manondro fa amin'ity tranga ity dia saika espaniola avokoa ny atiny rehetra, saingy ny olana amin'ity tranonkala ity dia efa lany andro ny ankamaroan'ny atiny. Ny fahitana ny gazety 2016 dia anisan'ireo malaza indrindra eto amin'ny fonony.
Raha mitady hamaky zavatra tsy maharitra ianao, tsy isalasalana fa azonao atao ny manangona magazina maotera isan-karazany, izay azontsika atao raha tsy misy fanavakavahana ara-nofo. Anisan'ireo takelaka tokony hifidianantsika atiny, ahitantsika ny ampahan'ny mpanoratra, karazana ary andiany. Saika hitantsika ny magazine rehetra azontsika eritreretina, ao anatin'izany ny tantara an-tsary na ny boky fandrahoan-tsakafo.
Toerana tsara indrindra hampidinana magazina fanatanjahantena
Tsy isalasalana fa ny soso-kevitray dia Kiosko.net, satria tsena an-tapitrisany dolara, maro ny vavahady nakatona, ka voafetra ny tolotra. Na dia ao amin'ny Kiosko.net dia hitantsika izay rehetra azontsika eritreretina momba ny fanatanjahantena. Ny tsara indrindra dia ara-dalàna tanteraka ity pejy ity, ka tsy mila miahiahy izahay.
Io dia ahafahantsika misintona lohateny marobe, izay ahitantsika ny baolina kitra, ny motorsport, ny tennis, ny basikety na ny atletisma Ny katalaogy dia mety ho voafetran'ity zavatra izay efa naneho hevitra teo aloha ity ihany, fa raha heverina fa maimaim-poana tanteraka izany dia tsy afaka mametraka drawbacks be loatra ao aminy isika.
Tranonkala tsara indrindra handefasana magazine amin'ny fo
Ary farany, hanome fanamarihana momba ny fampidinana PDF ny lohahevitry ny fo izahay, lohahevitra iray izay mirongatra hatrany eto amin'ny firenentsika. Tsy isalasalana fa ny gazety mifosafosa dia mamafa ny kioska, ary iray amin'ireo vitsy mamelona azy ireo velona. Gazety toa an'i Hola, Cosmopolitan, interviú na Clara dia anisan'ny malaza indrindra.
Manoro hevitra anao izahay PDF-Giant, vavahadin-tserasera izay manana katalaogy malalaka momba an'io lohahevitra io, manao azy ho iray amin'ireo pejy atolotra indrindra. Na dia izaho manokana aza dia tsy maintsy milaza an'izany Mbola aleoko Kiosko.net. Na dia betsaka kokoa aza ny safidy ananantsika, satria io dia mety ho hita indraindray, dia tsara foana ny manana safidy betsaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Sintomy maimaimpoana ireo magazine: ireo tranonkala 3 tsara indrindra amin'ny teny espaniola
Amazon Fire TV Cube, ny hery rehetra ao amin'ny fahitao [Analysis]
Ny hatsarana nataon'i X avy amin'i Kygo, miaraka amin'ny ANC ary feo mahatalanjona